Aching जोइन्टहरूमा, घुमाई limbs - कुनै पनि व्यक्तिको जीवन विष गर्न सक्ने एक अनुभूति। दुखाइ हरेक आन्दोलन संग नै सम्झना दिलाउँछ भनेर विशेष दुर्भाग्यपूर्ण। तार्किक इच्छा यी भावना छुटकारा र आन्दोलन को आनन्द बहाल गर्न। मान्छे प्रयोग analgesics कि दुखाइ फिर्ता गर्न आउनेछ आशामा, तर यो भ्रामक छ। मात्र कार्य ट्याब्लेटको पुग्छन्, र फेरि सबै ठाउँमा फिर्ता छ। आज, उच्च मांग chondroprotector "Geladrink गुण।" भनिन्छ हाम्रो आजको लेखको विषय छ कि - चिकित्सकहरु र यस दबाइ बारेमा दक्ष विशेषज्ञहरूको राय समीक्षा।
चिकित्सा वा आहार पूरक?
यो एक दबाइ र छैन एक आहार पूरक (BAA)। तर कि हल्कासित नलिनुहोस् कुनै कारण छ "Geladrink गुण।" समीक्षा चिकित्सकहरु र धेरै अध्ययन गर्ने र additives शरीरमा एक महत्वपूर्ण, लाभदायी प्रभाव छ भनेर पुष्टि। कारण के रहेको छ? शरीर - यो इष्टतम प्रदर्शन को लागि, विभिन्न भिटामिन, इन्जाइमहरु को ठूलो रकम आवश्यक तत्व, हर्मोन र अन्य धेरै कुराहरू पहिल्याउन एक जटिल प्रणाली हो। केही उहाँले उत्पादन, तर पदार्थ को सबै भन्दा खाना प्राप्त हुनुपर्छ। हाम्रो देश को साधारण नागरिकहरु शक्ति कल्पना गर्नुहोस्। नास्ता, लंच को लागि एक सैंडविच, खाने को लागि पकौडी लागि चिया। बढाइचढाइ, तर यो उदाहरण हाम्रो आहार को paucity देखाउँछ। अक्सर, पर्याप्त छैन समय र लागत पौष्टिक खाना एकदम महंगा छ। यो गुणस्तर पूरक किन्न र नियमित प्रयोग गर्न धेरै सस्ता छ।
"जोडहरुको र गलत खाना को रोगहरु कसरी?" - तपाईं सोध्न सक्छ। सीधा! सबै जोडहरुको र उपास्थि को सामान्य राज्य कायम राख्न लागि आवश्यक भवन तत्व, शरीर पनि खाना बाट हुन्छ। र इष्टतम लागूपदार्थ, धेरै प्रमाणिकरण पारित गरेको छ जो, आज छलफल "Geladrink गुण।" डाक्टर को समीक्षा रोकथाम र संयुक्त समस्या को उपचार दुवै को लागि आफ्नो उच्च नैदानिक प्रभावकारिता रिपोर्ट।
यो संरचना र घटक को कार्य
यस दबाइ जोडहरुको र मेरुदण्ड को रोगहरु को रोकथाम र उपचारका लागि एक अद्वितीय जटिल छ। उहाँले राम्रो उत्तिकै को musculoskeletal सिस्टम को भडकाऊ र dystrophic-degenerative रोगहरु व्यवहार छ। यसलाई भंग लागि musculoskeletal सिस्टम को प्रारम्भिक रिकभरी तत्व, विभिन्न घाइते, शल्य चिकित्सा उपायहरु बढवा दिन्छ।
यस्तो प्रभावकारिता दबाइ को "Geladrink गुण" प्रदान गर्दछ? समीक्षा चिकित्सकहरु अवलोकनीय अध्ययन, भारी हार सम्भव सामान्यतया काम गरिएका जो, retreated गर्दा र सानो र सबै निको थिए उदाहरणहरू प्रदान गर्नुहोस्। यो घटक को एक अद्वितीय सेट द्वारा facilitated थियो।
कोलेजन peptides। तपाईं थाह छ, यो पदार्थ तपाईंको जोडों लागि निर्माण सामाग्री छ। दबाइ को यो घटक को भाग रूपमा musculoskeletal सिस्टम लागि समर्थन सदस्य, र glycine र proline, महत्वपूर्ण एमिनो एसिड को अक्सर मात्र स्रोत हो। कोलेजन - संयोजी ऊतक लागि आवश्यक छ कि एक प्रोटीन। यसलाई आफ्नो लोच र बल प्रदान गर्दछ।
मैंगनीज - एक धेरै महत्वपूर्ण तत्व, एक शक्तिशाली एंटीओक्सिडेंट छ। यो कोलैजेन को संश्लेषण संलग्न र तनाव देखि जोइन्टहरूमा सुरक्षा छ।
Glucosamine सल्फेट -, उपास्थि सुरक्षा यसलाई नष्ट गर्न सक्ने पदार्थ को प्रभाव neutralizes। यो घटक उपास्थि र synovial तरल पदार्थ उत्पादन को hydration normalizes छ। यो संयुक्त गतिशीलता सुधार गर्न मद्दत गर्छ।
सेलेनियम - एक शक्तिशाली विरोधी carcinogenic तत्व। यो खाना जोड्नेमा को normalization योगदान र को प्रभाव बाट सेल झिल्ली सुरक्षा मुक्त कण। यो बुढ्यौली र अन्य रोक्छ degenerative परिवर्तन गर्ने हड्डी मा।
Methylsulfonylmethane - जैविक सल्फर यौगिकहरु को वितरण प्रदान गर्दछ प्राकृतिक घटक छ। यो तत्व सिर्जना संलग्न छ कोलैजेन फाइबर। यो एंटीओक्सिडेंट गुण छ।
भिटामिन सी पनि यसको एंटीओक्सिडेंट गुण लागि ज्ञात छ। यो एस्कोर्बिकएसिड redox प्रक्रियाहरू को उपस्थिति, साथै, यो कोलैजेन गठन लागि आवश्यक छ शुरूआत।
Boswellia निकाल्ने - प्राकृतिक, हर्बल संघटक सुनिंनु कम र दुखाइ relieves छ।
स्वस्थ मान्छे विरलै सामान्यतया हामी कुनै पनि रोग रोक्न सजिलो छ हुनत, रोकथाम र पनि उपचारको लागि उनलाई छैन लिइरहेको सुरु, Badam बुझाउँछ। दबाइ को कार्य को मुख्य दायरा - को musculoskeletal सिस्टम को सुरक्षा, पोषण र पुन: तत्व हो। यो उपास्थि र बंधन, हड्डी र tendons। केही अवस्थामा, दबाइ सल्लाह दिन्छन् "Geladrink गुण»? सक्रिय घटक को एक ठूलो संख्या शामिल संरचना, arthrosis र गठिया, rheumatoid गठिया, osteochondrosis, spondelitami र धेरै अन्य रोगहरूबाट लड्न राम्ररी सिद्ध।
के औषधि प्रशासन को एक परिणाम रूपमा हुन्छ
त्यहाँ एक स्थिर प्रभाव छ अघि रोग धेरै चलिरहेको छ भने, यो लामो समय लाग्न सक्छ। यो ढिलो तपाईं एक डाक्टर देख्न र सिफारिश लागूपदार्थ लिने शुरू, को छिटो सुनिंनु जोडों र दुखाइ मा, articular उपास्थि को जीव रसायन गुण र संरचना पुनर्स्थापना घटाउनुहोस्। एक दबाइ को आधारभूत कार्यहरु संग समानान्तर मा बाल, छाला र नङ, महिला धेरै रुचाउनु छन् जुन बेलामा लागि राम्रो छ "Geladrink गुण।" दबाइ युवा, सौन्दर्य र आन्दोलन को आनन्द जोगाइराख्न वर्ष भर पाठ्यक्रम प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि संरचना, अहानिकारक र प्रत्येक जीव लागि अति महत्त्वपूर्ण हो। BAA उपास्थि विनाश रोक्छ र संयुक्त को जटिल को पुनर्जनन बढवा दिन्छ।
प्रयोग को लागि निर्देशन
दबाइ "Geladrink गुण" दुई प्रकारका उपलब्ध छ। खेलाडीहरूलाई को समीक्षा एक स्थिर सकारात्मक परिणाम, पाउडर वा ट्याब्लेट कि तपाईँले प्रयोग गरिरहनु, नियमित उहाँको भर्ना हासिल छ जो कुरा। के तपाईं काममा निरन्तर हो भने, यसको लागि घर प्रयोग ठूलो छ र त्यो फरक स्वाद आउँछ को पाउडर को चक्की लिन थप सुविधाजनक छ। सबै बस चक्की संग, तपाईं एक दिन6टुक्रा,2पटक लिन आवश्यक छ, तर यसलाई आफ्नो डाक्टर संग जाँच गर्नुपर्छ अघि तपाईँलाई आवश्यकता भने "Geladrink गुण।" पाउडर पतला एक दिन एक पटक फारम (प्रति पानी कप 1 चम्मच) मा प्रयोग गर्न निर्देशन प्रदान गर्दछ।
बजार मा आज धेरै chondroprotectors छन्, तर तिनीहरू प्रत्येक अन्य देखि धेरै भिन्न छन्। हामी पहिले देखि नै दबाइ को कार्य को संरचना र मोड छलफल गरेको "Geladrink गुण।" Analogues पूर्णतया यसको गुण बारम्बार गर्नुपर्छ, तर बजार मा ती। गरेको generics बारी गरौं। मूल उत्पादन मा प्याटेन्ट को समाप्ति को पछि बजार प्रविष्ट गर्नुभएको लागूपदार्थ छन्। निर्माता अब विकास र नैदानिक परीक्षा पैसा खर्च गर्न आवश्यक, त्यसैले यस्तो सुविधा को लागत उदाहरण, दबाइ को "Geladrink गुण" को लागि, भन्दा धेरै कम हुनेछ। यस प्रकारको को Analogs निकट भविष्यमा हुन सक्छ, तर तिनीहरूलाई सम्म पनि, कुनै बजार छ।
फार्मेसी आंशिक हामीलाई अघि BAA प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भन्ने दबाइहरु छ। यसलाई "Glucosamine + Chondroitin," "Methylsulfonylmethane जस्ता हालतमा सम्बन्धित छ।" तथापि, तिनीहरूले अप बनाउन को घटक को मात्र एउटा सानो भाग समावेश "Geladrink गुण।" एक विशेषज्ञ संग परामर्श तपाईं नेभिगेट गर्न र आवश्यक पदार्थ को पूर्ण सीमा सङ्कलन गर्न धेरै उत्पादनहरु खरिद गरेर अतिरिक्त पैसा तिर्न छैन मद्दत गर्नेछ। चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् आवश्यकता बेवास्ता नगर्नुहोस्। यो समय र पैसा बचत र पनि पर्याप्त उपचार को एक ग्यारेन्टी रूपमा सेवा गर्दैछन्।
एक व्यक्ति किन्न वा एउटा विकल्प छ भने "Geladrink गुण 'को समीक्षा (दबाइ लिए जो) उहाँलाई लगभग थप एक डाक्टर को राय भन्दा चासोको विषय। वास्तवमा, यो बारेमा प्रतिक्रियाहरू धेरै राम्रो हो। तर यो रोग को धेरै सुरुमा biologically सक्रिय खाना पूरक को सेवन गरेर प्राप्त गर्ने अनुकूल परिणाम विचार गर्न आवश्यक छ। उहाँले एक निवारक दबाइ रूपमा धेरै राम्रो पनि आफूलाई देखाए रूपमा। तर प्रगतिशील मा, गंभीर रोग मात्र एक सहायता रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।
जोडहरुको पीडा भोग्न गर्ने धेरै मान्छे, धेरै विश्वसनीय अतिथि, छिटो निको प्रतिज्ञा गर्नुभएको। तर सबै रोगहरु यस दबाइ खपत गर्न सकिन्छ, त्यसैले तपाईँले आफ्नो डाक्टर संग जाँच निश्चित गर्नुहोस्। सामान्य मा, तथ्याङ्क अनुसार, सबै भन्दा अक्सर किनेको netabletirovannaya फारम अर्थ "Geladrink गुण" (पाउडर)। समीक्षा थप सुविधा ट्याब्लेटको (एक पटक दैनिक प्रबन्ध) को तुलना मा, एक सुखद स्वाद र मूर्त राज्य सुविधा भन्छन्। उहाँले एकदम सक्षम छ, दबाइ को कुनै पनि स्पाइनल हर्निया निको भनेर छैन र उपास्थि विनाश पुनर्स्थापना, तर जोइन्टहरूमा को degenerative प्रक्रियाहरू रोक्न स्पष्ट छ।
हामी पहिले देखि नै सुविधा ट्याब्लेट र पाउडर उपलब्ध छ भने छ। र त्यो र अन्य फारम एक महिना भित्र प्राप्त गर्न डिजाइन गरिएको छ। तर यो समय भन्ने BAA प्रभावित गर्न सक्छ, छोटो छ "Geladrink गुण।" समीक्षा यसलाई कम्तिमा तीन महिना लिन आवश्यक छ राम्रो लागि स्थिति परिवर्तन गर्न सुझाव। जब यो लागत एकदम palpable छ। एक महिनाको लागि पछिल्लो हुनेछ जो प्याकेजिङ्ग,, 3000 rubles खर्च हुनेछ क्रमशः न्यूनतम दर लागत 9000 rubles आवश्यक थियो। समीक्षा द्वारा न्याय, राम्रो लागि पहिलो ठोस परिवर्तन 1-2 हप्तामा प्रकट हुनेछ, तर उपचार परिणाम मजबूत जारी हुनुपर्छ।
अक्सर मानिसहरू बस फार्मेसी दबाइ मा किन्न "Geladrink गुण।" प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक - तिनीहरूले निर्देशित छन् के। साइड इफेक्ट शायद हुन्छन्, तर कहिलेकाहीं एलर्जी प्रतिक्रिया छन्। तपाईं एक छाला दाना नोटिस भने अस्थायी रूपमा लिइरहेको रोक्न र आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। प्रयोग गर्न सकिन्छ एलर्जी प्रतिक्रिया neutralize गर्न antihistamines।
को नवीनता र आज को उच्च लागत बावजुद enviable लोकप्रिय उपकरण पाउँछन् "Geladrink गुण।" समीक्षा contraindications सामान्यतया कवर छैन, त्यसैले तपाईं अधिक विस्तार यो बिन्दुमा बन्द गर्नुपर्छ। तपाईं गर्भावस्था समयमा औषधि प्रयोग गर्न सक्दैन। lactation - पनि एक असाधारण मामला मा, नियुक्ति मात्र डाक्टर गर्न सकिन्छ, कली को स्वीकृति लागि समय छैन। साथै, सम्भव दबाइ idiosyncrasy। यस्तो rheumatoid गठिया रूपमा केही रोगहरु, चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्, यसको स्वागत लागि contraindications पनि हो, त्यसैले आत्म-medicate गर्छन्।
"ब्रुडी प्लस": समीक्षाहरू, सुविधाहरू, निर्देशन, तस्विर
भिटामिन लिनका लागि सङ्केत गर्छ र contraindications "मैगनीशियम प्लस"
Cyanocobalamin - एक भिटामिन छ? Cyanocobalamin: वर्णन, प्रयोग
उपयोगी दूध। स्वास्थ्यको लागि पकाउनुहोस्
भिटामिन Alerana: समीक्षा र छाप
आमा जन्मदिन उपहार
साइबेरियन राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय (टम्स्क): इतिहास, विद्यार्थी समीक्षा
पूर्व सदस्य र समूह को वर्तमान संरचना "Banderos"
मिश्रको हाइरोग्लिफ्स। मिश्रको हाइरोग्लिफ्स र आफ्नो अर्थ। पुरातन मिश्री हाइरोग्लिफ्स
हाइड्रोक्विनको साथ क्रीमको लक्षण। क्रीम को व्हाइटिंग गुण
मिग-29: निर्दिष्टीकरण। मिग-29: युद्घ सामांग्री, गति, फोटो
इन्जिन को ताप स्थापना। इन्जिन preheating सिस्टम
विद्यालय कक्षाकोठाहरू लागि भौतिक साधन
एक शिशु मा खोकी